Iindlela ezi-6 zokuPhucula iMidiya yokuNxibelelana noMsitho | Martech Zone
Iindlela ezi-6 zokuPhucula iMidiya yokuNxibelelana kweNtengiso
Njengoko ndithatha inxaxheba kwimidiya yoluntu, ndihlala ndifumana imicimbi ebendingazi ukuba abahlobo bam, amaqabane okanye abathengi baya kubo. Ndizimasa iminyhadala engakumbi kunangaphambili. Le infographic ijonge indlela onokuyisebenzisa ngayo kwimidiya yoluntu ukukhuthaza umsitho; fumana ukuba yintoni eyona nto iphambili kwi-hashtag yomsitho osebenzayo kwaye ufumane iingcebiso kwiingcali nokunye okuninzi.
Nazi iindlela ezi-6 zokunyusa amajelo asekuhlaleni ukuthengisa umcimbi wakho olandelayo!
Yakha Facebook Event ukwabelana nokwazisa umcimbi wakho.
Ii-hashtag zophando kwaye wenze i-hashtag eyahlukileyo kumnyhadala wakho.
Ukuphuhlisa kunye nokuhambisa i-tweet ebhalwe kwangaphambili ukuba abantu babelane ngayo kwaye babhengeze kwi-Twitter. Sebenzisa isixhobo esinjenge Cofa kuTweet ukwenza lula.
dala Umxholo wentengiso kunye nokukhuthaza umcimbi wakho kwi-intanethi.
Yabelana ngethegi yevidiyo kunye neefoto ezithathiweyo kulo msitho. Ukuba uyenza kwangoko ngokwaneleyo, abahlobo baya kujoyina abahlobo babo sele bekhona.
Yabelana ngeembalasane ze Umnyhadala kwi-Instagram kwaye Vine ngezinto ezintle.
I-infographic ephuhliswe yi IZiko leNgqungquthela yeLakeshore.
tags: cofa kwi-tweetisiganeko hashtagukuthengisa umcimbiifoto yomsithoukukhuthazwa komnyhadalaisiganeko kwimidiya yoluntuIvidiyo yomnyhadalaumcimbi we-facebookinstagramdibanakhuthaza umcimbiintengiso yemidiya yoluntuweposiumdiliyaividiyo yeidiliya
Uyenza njani i-thumbnail ye-Youtube